Iyada oo dhammaan noocyada kala duwan ee isticmaalka ay soo baxayaan, baahida loo qabo daryeelka ciddiyaha ma muuqan. Laakiin sababta oo ah fadhiidnimada cudurka faafa, markii noocyada kale ee isticmaalka la xaddiday, waxaan si lama filaan ah u ogaanay in farshaxanka ciddiyaha uu si qoto dheer ugu lug lahaa nolosheena. Xogta ayaa muujinaysa in ...
Sida Loo Isticmaalo Mashiinka Cidiyaha?
Mashiinka ciddiyaha ayaa ah wax soo saarka hubka ciddiyaha oo xirfad leh oo isku dara shaqooyin badan. Ilaa iyo intaad haysato, waxaad had iyo jeer ilaalin kartaa ciddiyaha quruxda iyo soo jiidashada leh (isla shaqada ciddiyaha ciddiyaha). Kuwa soo socda ayaa ku saabsan qaab dhismeedka shaqaynaya ee badeecadan: 1. Jirka ugu weyn ee manicu ...
Isticmaalka Badbaadada ee Mashiinka Qodista Cidiyaha iyo Qoditaanka Cidiyaha
Manicurist -ka oo baranaya isticmaalka qalabka korontada ee korontada markii ugu horeysay waa inuu fahmaa in sanduuqa korontada aan loo isticmaalin in lagu sameeyo caajisnimada. Marka la barbardhigo baararka ciidda, waad dooran kartaa si aad u hagaajiso hufnaanta shaqada. Haddii gacmaha manicurist -ku ay xun yihiin, waa inuu hagaajiyaa xirfadiisa ...
Tilmaanta Buuxda ee Cidiyaha Qodista
Jajabyada ciddiyaha oo tayo sare leh kaliya ma iska xiiri karaan ciddiyaha. Xirmooyinka qodista ciddiyaha waxay ku yimaadaan qalab kala duwan, qaabab, cabbirro, iyo jajab. Nooc kasta oo daloolin ah wuxuu leeyahay adeegsiyo iyo ujeeddooyin kala duwan. Qeybtan, waxaan ku sharxi doonnaa qoditaanka ciddiyaha ee qalabka kala duwan. Afartaan qalab ayaa ah kuwa ugu wada ...
Sida loo sameeyo oo loo dayactiro ciddiyaha quruxda badan?
Habaynta ciddiyaha ayaa saldhig u ah naqshadaynta ciddiyaha. Xitaa iyada oo aan lahayn ciddiyaha ciddiyaha, ciddiyaha nadiifta ah oo hagaagsan ayaa siin doona aragti lagu farxo. Si aad u samaysato ciddiyaha qurxoon, waxaad ka bilaabi kartaa labada dhinac ee soo socda: mid waa jaridda dusha ciddiyaha, tan kalena waa jaridda geesaha farta. Isku -darka ...
Bandhigii 12aad ee Canton
Cinwaanka: A1532, hoolka bandhigga ee Guangzhou Import and Export Fair Time: 04/15/2021-04/19/2021 Bandhigga Soo-dejinta iyo Dhoofinta Shiinaha, oo sidoo kale loo yaqaan Canton Fair. waxaa la aasaasay gu'gii 1957 waxaana lagu qabtaa Guangzhou gu 'kasta iyo ...
Midabada ugu fiican ee ciddiyaha ciddiyaha gaaban
Waxaa jira qaabab badan oo manicure ah oo suuqa ku jira xilligan casriga ah. Manicure badan ayaa loogu talagalay ciddiyaha dhaadheer, laakiin taasi micnaheedu maahan inaysan jirin midabyo madadaalo leh iyo naqshado loogu talagalay kuwa leh ciddiyaha gaagaaban. Cidiyaha gaagaaban waxay soo bandhigi karaan muuqaalo badan oo madadaalo iyo mid gaar ah leh. Baro wax ku saabsan poliska cidiyaha ugu fiican ...
Siyaabaha ugu sarreeya ee aad lacag ugu keydiso manicure -ka
Waxaa laga yaabaa inaad ku raaxaysato inaad safaro isdaba joog ah ku tagto salooniga ciddiyaha si aad u hesho manicures qurux badan. Laakiin waligaa ma eegtay inta lacag ah ee ay ku darsato waqti ka dib? Haddii aad raadinayso siyaabo cusub oo aad lacag ugu keydiso adiga oo weli haysta ciddiyaha quruxda badan? Baro qaar ka mid ah siyaabaha ugu sarreeya ee aad lacag badan ugu badbaadin karto manicure -ka ...
Qaar ka mid ah fikradaha naqshadaynta ciddiyaha budada ah ee si fudud loo dusiyo si loo tijaabiyo
Ciddiyaha budo boodhka ah ayaa noqday mid ka mid ah hababka ugu caansan manicure -ka dhowaan. Habka budada maqasku wuxuu adeegsadaa badeecooyin dhowr ah si loo abuuro ciddiyaha xarrago leh, moodada ah oo wax ku ool ah. Waxaa jira muuqaalo iyo naqshado u gaar ah oo aad abuuri karto adiga oo isticmaalaya boodhka ciddiyaha. Baro xoogaa yar oo ah budada dhuuqitaanka ...